ISagrada Familia - Uchungechunge olusha lweNetflix | Bezzia
ISagrada Familia: Uchungechunge olusha lweSpanish Netflix
USusana godoy | 12/10/2021 14:00 | Izindaba
INetflix iyaqhubeka nokumangaza kwesinye isikhathi. Ngoba kuyiqiniso ukuthi njalo kaningi wethula uchungechunge lweziphakamiso njengokuqukethwe, kepha kulokhu kunikeze isimanga esikhulu lapho kumenyezelwa Sagrada Familia. Olunye lochungechunge lwaseSpain olunabalingisi abakhulu futhi okuncane okwaziwayo kuze kube manje, kepha okuzonikeza okuningi okuzokhulunywa ngakho.
Kusukela manje iyakwenza futhi imininingwane embalwa kuphela eyaziwayo. Abanye babo ngokusebenzisa amanethiwekhi athile wokuxhumana nabantu nangamanye amakhanda okucabanga. Kepha bekufanele ukushiwo ngoba lapho ngifika esikrinini esincane kuzoba nguquko impela, cishe impela. Thola konke ngaye!
1 Izimanga zeNetflix
2 Obani abalingiswa abaphambili beSagrada Familia?
3 Umbono kaManolo Caro
Kuyiqiniso ukuthi iNetflix iza isimangaze kwesinye isikhathi ngoba inokuqukethwe okubanzi impela. Phakathi kochungechunge namabhayisikobho, kwesinye isikhathi size sikhungatheke ngoba asazi ukuthi sizokhetha yiphi. Kuyiqiniso futhi ukuthi kwesinye isikhathi silinde ama-premieres ngoba vele amenyezelwa yipulatifomu, ukuze sonke sikwazi ukwenza uhlobo lwe-ajenda. Kepha kulokhu bekungenjalo futhi sengathi kube isimanga sosuku lokuzalwa, kufika izindaba zokuthi uchungechunge olusha lwaseSpain lungumsebenzi wesikhulumi. Kepha hhayi lokho kuphela, kepha futhi inobuso obudume kakhulu enkundleni yezwe futhi abaqhamuka ekuvuneni ezinye izimpumelelo eziningi.
Obani abalingiswa abaphambili beSagrada Familia?
UNajwa Nimri Ungomunye wobuso obaziwa kakhulu esigcawini sikazwelonke. Uqale ukusebenza noSantiago Segura kodwa wabuye weqa no-Amenábar, waze wathola enye yezindima zakhe ezihlonishwa kakhulu ochungechungeni oluthi 'Vis a Vis'. Vele asikwazi ukukhohlwa izinkathi zonyaka azijoyine kwi-'La casa de papel '. Manje uzomangala eSagrada Familia, sesiqinisekile. I-Alba Flores kuyinto Elinye lamagama amakhulu athola amandla futhi akumangalisi. Ngaphezu kokuba ngumlingani kaNajwa, manje ubuyela ekubeni yingxenye yokulingiswa okuhle kwesikrini esincane. Kokubili i-'Vis a Vis 'ne' La casa de papel 'zimholele ekutheni awine izindondo eziningi.
Kepha futhi ukuthi abalingisi bakhiwa uCarla Campra osemusha esimbone 'kudayari eyimfihlo yentsha' naku 'Okunye ukubukeka'. Ama-'Fugitivas 'noma' Ánimas 'ngezinye zeziqu lapho sibone khona u-Iván Pellicer esebenza. Ngaphezu kwalokho, omunye wabangane bakhe abakhulu nguMacarena Gómez, esimazi ikakhulu ngendima yakhe njengo ULola ku 'Lowo Ozayo', kodwa futhi unomlando omude ngemuva kwakhe.
Umbono kaManolo Caro
Ngaphezu kwabo bonke ubuso obaziwayo, okungebona abambalwa, UManolo Caro ushicilele kumanethiwekhi abo omphakathi. Echaza lapho kwaqhamuka khona umqondo wokwenza umsebenzi onje. Kubukeka sengathi akuyona into entsha, kepha ukuthi kuyinto ecatshangelwe kangcono ngoba isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili wayenomqondo nesifiso sokukwazi ukunikeza umphakathi lokho ayenakho engqondweni yakhe. Yebo, unesibopho se 'The House of Flowers', nokungenye yezimpumelelo ezinkulu okufanele zibhekwe. Kulokho okubonakala sengathi, ukuqoshwa sekuvele kuyaqhubeka futhi kuyenzeka eMadrid. Ngakho-ke selokhu kwaphuma izindaba zochungechunge olunje, wonke umuntu ulindele izindaba, ukuze akwazi ukujabulela okunye, ukuthinta itulo noma abalingiswa balo bebonke. Uzoyibona lapho iphuma?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » ISagrada Familia: Uchungechunge olusha lweSpanish Netflix
Ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-barbell back